Tiro al-Shabaab ah oo lagu laayay Shabeellaha Hoose - guddoomiyaha gobolka - Halbeeg News
Wasaaradda gaashaandhigga: dhammaan ciidamada diiwaanka dowladda ku jira weey helaan mushaarkooda
Ehellada dadkii ku dhintay diyaaraddii Itoobiya ee burburtay oo la sheegay in ay magdhaw culus helayaan
Tababare u dhashay dalka Gaana oo leylin doona xulka qaranka Soomaaliya
Tiro al-Shabaab ah oo lagu laayay Shabeellaha Hoose – guddoomiyaha gobolka
MUQDISHO(HALBEEG)-Guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed, Maxamed Ibraahim Barre ayaa ka warbixiyay weerar ay ciidanka kumaandooska Soomaaliya iyo ciidamo Mareykan ah ay si wadajir ah uga fuliyeen Shabeellaha Hoose.
Guddoomiyaha oo la hadlay warbaahinta qaar ayaa sheegay in howlgalkaas uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Hanti-Wadaag oo u dhow magaalada Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Ujeedka weerarka ayuu guddoomiyuhu ku tilmaamay in uu ahaa mid lagu beegsanayay saldhigyo uu ururka al-Shabaab ku leeyahay deegaannadaas.
“Howlgalkan waxa uu ahaa howlgal lagu beegsanayay nimanka nabaddiidka ah oo deegaannadaas ku dhuumaaleysanayay, howlgalkuna waxa uu ku dhacay sidii loogu tala galay,” ayuu yiri guddoomiyaha.
Mar uu ka hadlayay khasaaraha weerarkaas ka dhasahay ayuu tilmaamay in rag ka tirsan al-Shabaab ay dileen qaar kalena ay soo qabteen walow uu ka gaabsaday in uu sheego tirada rasmiga ah, sidoo kalena waxa uu sheegay in wax khasaara ah uusan soo gaarin dadka deegaanka.
Guddomiyu waxa uu tilmaamay in deegaanka Hanti-Wadaag uu ka mid ahaa deegaannada ay gacanta ku hayaan al-Shabaab kana soo maleegi jireen falalka weerarrada iyo dilalka ah.
Weerarkan ka dhacay Shabeellaha Hoose ayaa ka mid ah ah sil silado weerarro ah oo waayihii dambe ay qaadayeen ciidamada Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Mareykanka kaasoo lagu bartilmaameedsanayay fariisimaha ururka Al-shabaab ay ku leeyihiin Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.
Madaxweynaha la doortay ee Puntland oo kormeeray wasaaradda Maaliyadda